नेपालको पहिलो अनलाइन प्रविधि मेला ‘डेल्टा २.०’ सुरू - Tech News Nepal Tech News Nepal
नेपालको पहिलो अनलाइन प्रविधि मेला ‘डेल्टा २.०’ सुरू
बिहिबार, श्रावण ७, २०७८
काठमाडाैं । नेपालकै पहिलो प्राविधिक मेला डेल्टा २.० सुरू भएकाे छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रमुख आतिथ्यतामा बुधबार याे मेलाकाे उद्घाटन गरिएकाे छ ।
डेल्टाले करिब एक महिनादेखि याे मेलाका लागि प्रि-इभेन्ट गर्दै आएको र बुधबारदेखि ४ दिने लामो प्रविधि मेला सुरू भएकाे जानकारी दिएकाे छ । प्रि-इभेन्टका रुपमा विभिन्न शीर्षकमा भर्चुअल रुपमा तालिम, टक शाे र अनलाइन गोष्टीहरु सम्पन्न भएका थिए ।
प्राविधिक मेलाको उद्घाटन समारोहमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङका अतिरिक्त पूर्वाधारविज्ञ डा. सुर्यराज आचार्य, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव जित चन्द, नेपाल इन्जिनियर्स असोसियसन (एनईए) प्रदेश १ का अध्यक्ष यशवन्त शाह, पूर्वाञ्चल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ओमप्रकाश ढकाल लगायतकाे उपस्थिति थियाे ।
आफू इन्जिनियरिङ विधाकै रहेको र स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर देशकै लागि काम गरिरहेकाे बताउँदै प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख घिसिङले युवा इन्जिनियरहरुलाई प्रविधिमैत्री भएर स्वदेशमै काम गर्न सुझाव दिए । आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले विद्यार्थीलाई उज्ज्वल भविष्यका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरे ।
देश विकास तथा निर्माणमा युवा इन्जिनियरहरुको भूमिकाबारे प्रकाश पार्दै पूर्वाधारविज्ञ डा. सुर्यराज आचार्यले यस्ता कार्यक्रममा युवाको सहभागिता हुनैपर्ने र आफ्नो तहबाट उनीहरूलाई हौसला, प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्ने धारणा राखे ।
बुधबार थ्रीडी मोडल डिजाइन प्रतियोगिताको डिफेन्स सञ्चालन भएको र यसमा ११ वटा टिम संलग्न रहेको आयोजकले जानकारी दियाे । बिहीवार र शुक्रबार प्रेजेन्टेसन, कोडाथोन तथा म्याटल्याबको डिफेन्स गर्दै ९ गते पुरस्कार वितरण तथा समापन कार्यक्रम रहेको डेल्टाका सचिव मनिशा कार्कीले बताइन् ।
डेल्टाका अध्यक्ष सुदिप बिष्टले बुधबारदेखि चार दिन यो मेला सञ्चालन हुने र बाँकी दिनहरुमा पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दै जाने बताए ।
टेकपानाको ‘मेगा गिभअवे’ को नतिजा सार्वजनिक, विजेताको सूचीसहित
काठमाडौं-टेकपानाले आफ्नो दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको मेगा गिभअवेको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । टेकपानाको
विद्युतीय माध्यमबाट वितरण गर्न हरेक प्रदेशमा शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरिने
काठमाडौं । सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री
प्राविधिक विषय पढ्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’
काठमाडौं । सरकारले प्राविधिक विषय पढ्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ ल्याएको
ग्राफिक डिजाइन प्रतियोगिताका लागि असोज २ सम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । सूचना प्रविधिमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको ग्राफिक्स डिजाइन प्रतियोगिताका लागि